Jitsi Desktop - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနဲ့စကားပြောခန်း | Linux မှ
Jitsi Desktop - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့် Chat လျှောက်လွှာ
ဒီကတည်းက 2020 တစ်နှစ်ကတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည် ရုပ်သံဆွေးနွေးပွဲ ၏ရလဒ်အဖြစ်လူကြိုက်များဖြစ်လာကြပါပြီ Covid-19 ကပ်ရောဂါ နှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အထီးကျန်နှင့်လူမှုရေးဝေးကွာသော၊ အက်ပလီကေးရှင်းများစွာနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာနှင့်ဝက်ဘ်ပလက်ဖောင်းအသစ်များသည်အစပြုခြင်းဖြင့်အားသာချက်ယူပြီးဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ Jitsi ဒက်.
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ Jitsi တစ်ခုလုံးအဖြစ်ကအစုတခုဖြစ်ပါတယ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများ ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြေရှင်းနည်းများ လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း သူ၏လူကြိုက်အများဆုံးစီမံကိန်းများဖြစ်ခြင်း, Jitsi videobridge y Jitsi တွေ့ဆုံအထူးသဖြင့်အင်တာနက်မှဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကိုအာရုံစိုက်သော၊ Jitsi ဒက် ရိုးရာနှင့်အခြေခံသည် client လျှောက်လွှာ ၏ (desktop) ၏ Jitsi စီမံကိန်း.
ဒီ post ဟာပထမ ဦး ဆုံးမဟုတ်ပါ Jitsiသို့သော်၎င်းသည်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။ သို့သော်စိတ်ဝင်စားသောသူတို့အဘို့ Jitsi အက်ပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ်သူတို့၏နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သောသူတို့ကသူတို့ကိုလာလည်ပတ်ပြီးသူတို့အကြောင်းနည်းနည်းလောက်ပြောပြနိုင်တယ်။ အောက်ပါတို့မှာ -
Calla, Jitsi တွင်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအထူးထိတွေ့မှုရှိသည့် videoconferencing system
Mattermost 5.25 သည် Jitsi အတွက်ပေါင်းစည်းမှု၊ Welcomebot အတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်
ရရှိနိုင် Jitsi 1.0 တည်ငြိမ်!
"Jitsi (ယခင် SIP Communicator) သည် Windows, Linux နှင့် Mac OS X တို့အတွက် video conferencing, VoIP နှင့် instant messaging application ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များသောတယ်လီဖုန်းနှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး protocol များနှင့်လိုက်ဖက်ပြီးလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က၎င်း၏ပထမဆုံးတည်ငြိမ်သော version သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Jitsi သည်အခမဲ့ GNU အငယ်စားပြည်သူ့လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအရဖြန့်ဝေသည်။" ရရှိနိုင် Jitsi 1.0 တည်ငြိမ်!
1 Jitsi Desktop: ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့် Chat လိုင်း
1.1 Jitsi Desktop ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 Linux ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း
Jitsi Desktop: ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့် Chat လိုင်း
Jitsi Desktop ဆိုတာဘာလဲ။
ယနေ့ပိုမိုတိကျသောနှင့်ခေတ်သစ်ဖော်ပြချက် Jitsi ဒက် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
ဦး လားmultip Multiplatform၊ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် client ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိ Instant Messaging (IM)၊ အသံချက်တင်နှင့်ဗီဒီယိုတို့ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် Jabber / XMPP နှင့် SIP Voice over IP (VoIP) protocol အပါအဝင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော Internet Messaging နှင့်တယ်လီဖုန်း protocol များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် OTR (Off-the-Record) ပရိုတိုကောလ်မှတစ်ဆင့် IM အတွက်သီးခြားလွတ်လပ်သောစာဝှက်ခြင်းနှင့် ZRTP နှင့် SRTP မှတဆင့်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုအစီအစဉ်များအတွက်လုပ်ဆောင်သည်။" ဆက်သွယ်ရေး - GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းများ.
ကွန်ဖရင့်၊ chat၊ desktop share လုပ်ခြင်း၊ ဖိုင်ပို့ခြင်း၊ သင်အကြိုက်ဆုံးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးကွန်ယက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
ယန္တရားနှစ်ခုလုံးတွင် ၄ င်း၏ encryption စနစ်ကြောင့်လုံခြုံသောဗွီဒီယိုနှင့်အသံခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ပါ။
လက်ခံသူတွင်ဗီဒီယိုစွမ်းရည်ရှိသော XMPP သို့မဟုတ် SIP ဂလိုင်းရှိသရွေ့၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသည့်မည်သည့် Operating System ၏ desktop ကိုမျှဝေပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အခြား Jitsi အသုံးပြုသူများအား Operating System အမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံးကိုမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ host host ၏ app များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို session ကို ZRTP ဖြင့်စာဝှက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ Jitsi ဒက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကျော်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် Windows, Mac OS X သို့မဟုတ် Linux။ အသုံးပြုသူ၏ကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတည်ဆောက်ပြီးသတ်ပစ်နိုင်သည် FreeBSD Distro.
Jitsi Desktop ကိုမထည့်သွင်းခင်သေချာအောင်လုပ်ပါ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသော operating system (GNU / Linux Distro) ထည့်သွင်းလိုက်ပြီ ဂျာဗား JDK / JRE 8၎င်းဗားရှင်းကိုသာထောက်ပံ့သည်။ အမှု၌, သင်၏ GNU / Linux Distro သင်၏ internal repositories တွင်ထိုကဲ့သို့သော package များကိုရရှိနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ operating system ယခင်ကကဲ့သို့ပိုမိုမြင့်မားဗားရှင်းရှိပါတယ် JDK / JRE 11အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမှားအယွင်းများကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းကိုမတိုင်မီသို့မဟုတ်နောက်မှဖျက်ပစ်ရန်သေချာစေပါ -
ဒီအဆင့်ပြီးသွားရင်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် Jitsi Desktop ကို install လုပ်ပြီး run ပါ။ သင်၏လက်ရှိနှင့်ရရှိနိုင်သော executable ကို install လုပ်ရန်၊ အောက်ပါ command ကိုသာလုပ်ပါ။
လိုအမှု၌ သင့်ရဲ့ repository ကနေတိုက်ရိုက် install လုပ်ပါအောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာပါ link ကို။ နှင့်အမှု၌သင်တို့ကဲ့သို့အပိုအထုပ်ကို download လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် "Jitsi-archive-keyring_1.0.1_all.deb" next ကိုနှိပ်ပါ link ကို.
မှတ်ချက်ဖြေ။ OpenJDK သို့မဟုတ် Java 11 ဘေးတွင်တပ်ဆင်ထားသည် OpenJDK သို့မဟုတ် Java 8အောက်ပါ command များနှင့်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်သတိရပါ ဂျာဗား 8 ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ ဂျာဗား 11:
ပုံမှန်အားဖြင့်မဟုတ်လျှင်၊ အနည်းဆုံးပထမတစ်ခု၏အောက်ပါ command command များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Jitsi Desktop»Jitsi စီမံကိန်း၏တရားဝင် Cross-platform desktop client ဖြစ်သော videoconferences နှင့် chats များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသုံးဝင်သော open source app တစ်ခု၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Jitsi Desktop - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့် Chat လျှောက်လွှာ
NetBeans 12.2 သည် Java, PHP နှင့်အခြားအရာများအတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုထောက်ပံ့သည်
JetBrains သည် Space, developer များနှင့်ဒီဇိုင်နာများအတွက်ပူးပေါင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုလွှတ်တင်သည်